कन्चनलाइ हेर्न नेपालकै टप डाक्टर चितवनमा, डाक्टर सगै निरु पुगिन आइसियुमा (भिडियोसहित) – Online Nepalaja
January 31, 2021 118
चितवन । कञ्चन तिमील्सीना जो यतिबेला आधा शरीर प्यारालाईसिस भएर अस्पतालको बेडमा पल्टि रहेका छन् । उनै कञ्चनको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनकोलागी नेपालकै टप मध्यका डक्टर घनश्याम कंडेल यतिबेला चितवन अस्पतालमा पुगेका छन् । उनी न्यूरो फिजिसियन हुन् । उनले चितवनमा पुगेर कञ्चनको अवस्थालाई बुझेका छन् । काठमाण्डौदेखि डक्टर चितवन पुगेर छोरा कञ्चनको जाँच गर्छन् भन्ने सुनेर कञ्चन निको हुन्छन् भन्ने कुरामा उनकी आमा र अरु सबैलाई एउटा आशा पलाएको छ ।
कञ्चन यो अवस्थाबाट फेरी पहिलाको अवस्थामा फर्कन सक्छन् कि सक्दैनन् ? किनभने यतिबेला कञ्चनको दुवै खुट्टाले काम गर्न छाडेको छ । अनिशालाई प्रेम विबाह गरेका कञ्चनले अनिशाले नै विबाह भएको केही दिनमै कञ्चनले आफुलाई ज’र्व’ज’स्ती विबाह गरेको र आफुले कञ्चनलाई चिन्दिन भनेको हुनाले उनले वि’ष से’व’न गरेका थिए । सोही असरले कञ्चन अहिले प्यारालाईसिस भएका छन् । उनी बाँच्छन् या बाँच्दैनन् भन्ने कुरा नै अन्यौलको थियो ।
Prevहास्यकलाकार केदार घिमिरे( माग्नेबुढा) को बुवाआमा भेटिए यस्तो अबस्थामा, हसाएर झन्डै मारे (भिडियोसहित)
Nextसुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित)
भाेलि देशव्यापी आम हड्ताल गर्ने प्रचण्ड-नेपाल समूहकाे घाेषणा : भोलि के-के खुल्छ के-के बन्द हुन्छ ?
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1322)